ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ - Institute Of Chin Affairs
ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ
ထန်တလန်မြို့နယ်သည် ဟားခါးခရိုင်အတွင်း တည်ရှိပြီး ရပ်ကွက် (၃) ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၃၇) ခု၊ ကျေးရွာပေါင်း (၈၇) ခုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ (၅) သောင်းကျော်ခန့် ရှိပါသည်။ လုံလဲရ်ကျေးရွာ (Lungler) တပ်စခန်း၊ ဝမ်သူး ကျေးရွာ (Vuangtu) တပ်စခန်း စသည့် စစ်ကောင်စီတပ်၏ တပ်စခန်းများ တည်ရှိသည့် မြို့နယ်လည်း ဖြစ် ပါသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအား ကာကွယ်ခုခံခြင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှစ၍ ချင်းပြည်နယ်အနှံ့တွင် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များက ဆန္ဒပြဆန့်ကျင်မှုများအပေါ် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခြင်းနှင့် မတရားဖမ်းဆီး အကျဉ်းချခြင်း တို့ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်။ ဟားခါးမြို့နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်တို့တွင် ဖမ်းဆီးခံ ရသည့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအား လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ရာတွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များ ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာသည့်အပြင် မြို့တွင်းစစ်ဆေးမှု များ၊ ညအချိန်တစ်အိမ်တက်ဆင်း ဧည့်စာရင်းစစ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းလုပ်ရပ်တို့အား တုံ့ပြန်ရန်နှင့် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခုခံရန်အတွက် လက်နက်ကိုင်ကာ စစ်ကောင်စီလုပ်ရပ် တို့အား ခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြရသည်။ မေလ မှ စတင်ကာ CDF-Hakha, CDF-Thantlang တို့နှင့် စစ်ကောင်စီ တပ်များကြား တိုက်ပွဲများ စတင်ခဲ့သည်။
(၁) မေလ (၂) ရက်နေ့မှ (၄) ရက်အထိ ဟားခါး-ထန်တလန်ကြားတွင် CDF-Hakha နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်များကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
(၂) မေလ (၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၉) ရက်နေ့အထိ ဟားခါး-ဖလမ်းလမ်းမကြား၊ ဟားခါး-မတူပီ လမ်းမ နှင့် ဟားခါး-ထန်တလန်လမ်းမပေါ်တို့တွင်လည်း တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
(၃) ဇွန်လ (၁၀) ရက်နေ့မှစတင်တာ ထန်တလန်မြို့နယ်ခွာဟရိန်းတောင်ကြောတို့တွင် CDF-Thantlang တို့နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်များကြား တိုက်ပွဲများ ထပ်မံဖြစ်ပွားလာပါသည်။ စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ (၁၇) ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
(၄) သြဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၁) ရက်အထိ ဟားခါးမြို့နယ်နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ် ကြား တွင် CDF-Thantlang တို့ကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်ကောင်စီဘက်မှ (၅) ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သည်။
(၅) စက်တင်ဘာ (၆) ရက်နေ့တွင် ဟာခါး-ထန်တလန်ကြား စစ်ကောင်စီအင်အား (၈၀) ခန့်နှင့် CDF-Thantlang တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်ကောင်စီဘက်မှ (၁၅) ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သည်။
(၆) စက်တင်ဘာ (၉) ရက်နေ့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ ထန်တလန်မြို့တွင်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ပစ်ခတ်မှုများ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်ကောင်စီဘက်မှ တပ်သား (၂) ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
(၇) စက်တင်ဘာ (၁၀) ရက်နေ့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် CDF-Thantlang နှင့် ပူးပေါင်း အဖွဲ့တို့ လုံလဲရ်ကျေးရွာအနီးရှိ စစ်ကောင်စီစခန်းနားတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ် ကောင်စီတပ်မှ လုံလဲရ်ကျေးရွာအား တိုက်လေယာဉ်များအသုံးပြုကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ သည်။
(၈) စက်တင်ဘာ (၁၁) ရက်နေ့တွင် CDF-Thantlang တို့မှ လုံလဲရ်အနီးရှိ စစ်ကောင်စီ စခန်းအား ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
(၉) စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် CDF-Thantlang တို့ ကြား ထန်တလန်မြို့နား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်ကောင်စီဘက်မှ တပ်သား (၃၀) ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
(၁၀) စက်တင်ဘာ (၂၇) မနက်ပိုင်းတွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် CDF-Thantlang တို့ ကြား ထန်တလန်မြို့တွင်း တစ်နေရာတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်ကောင်စီတပ်သား (၅) ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သည်။
(၁၁) အောက်တိုဘာ (၈) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် CDF-Thantlang တို့ ကြား ထန်တလန်မြို့တွင်း တစ်နေရာတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်သား (၁) ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
စစ်ကောင်စီတပ်၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ
ဇွန် လ (၁၀) ရက်နေ့ ခွာဟရိန်းတောင်ကြောတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲများကြောင့် အနီးနားရှိ ရွာ (၅) မှ ပြည်သူ (၆၀၀) နီးပါး အိုးအိမ်စွန့်ကာ ထွက်ပြေးကြရသည်။ တစ်ချို့မှာ တောထဲတောင်ထဲ လျှိုထဲ တွင် တိမ်းရှောင်ပုန်းခိုရပြီး တစ်ချို့မှာ ဟားခါးနှင့် ဖလမ်းမြို့နယ်တို့တွင် ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်ခဲ့ ရသည်။ (နောက်ဆက်တွဲ (၁) တွင် ကြည့်ပါ။)
ဩဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ထန်တလန်မြို့ရဲစခန်းအနီး စစ်ကောင်စီတပ်မှ လက်နက် ကြီးများဖြင့် ရမ်းကားပစ်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်ထဲတွင် ပုန်းခိုနေသည့် (၁၀) နှစ်အရွယ် ကလေးအား ကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီး အရပ်သား (၉) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ နေအိမ်အများ အပြား ကျည်ထိမှန် ပျက်စီးခဲ့သည်။ (နောက်ဆက်တွဲ (၂) တွင် ကြည့်ပါ။)
ဩဂုတ်လ (၂၇) ရက်နေ့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ ဩဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့က ပစ်ခတ်မှုတွင် မပေါက် ကွဲပဲ ကျန်နေသည့် လက်နက်ကြီးကျည်အား နေအိမ်မှ ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားရာမှ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့ကာ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ သေဆုံးခဲ့ပြီး (၁၁) ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရသူ များအား ဟားခါးမြို့သို့ ဆေးကုသရန် ပို့ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဟားခါးမြို့သို့ ဆေးကုသစဉ် သေဆုံးသူ အိမ်ရှင်၏ (၁၄) နှစ်အရွယ် သားဖြစ်သူသည် ဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ (နောက်ဆက်တွဲ (၂) တွင် ကြည့်ပါ။)
စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စစ်ကောင်စီတပ်၏ မြို့တွင်းစစ်ဆေးမှုများကြောင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ ထန်တလန်မြို့ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်က နေအိမ် (၁) လုံး မီးလောင်ပြီး၊ Thantlang Baptist Church (TBC) ဘုရားကျောင်း အဆောက်အအုံခေါင်မိုးများ ကျည်ထိခဲ့ ရသည်။ ထို့အပြင် (၉) လအရွယ်ကလေးငယ်၊ ၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး၊ (၂၃) နှစ်နှင့် (၅၅) နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး စုစုပေါင်း ပြည်သူ (၄) ဦးလည်း ကျည်ထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ (နောက်ဆက်တွဲ (၂) တွင် ကြည့်ပါ။)
စက်တင်ဘာ (၁၀) ရက်နေ့တွင် လုံလဲရ်ကျေးရွာရှိ စစ်ကောင်စီစခန်းအနီးတိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီ တပ်မှ တိုက်လေယာဉ်အသုံးပြုကာ လုံလဲရ်ကျေးရွာအပေါ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက် ခဲ့သည်။ နေအိမ် (၃၄) အိမ်ခန့် ဗုံးဒဏ်သင့်ခဲ့ရပြီး Methodist Church၊ COTR (Church on The Rock) Church နှင့် Baptist Library အဆောက်အအုံများ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
စက်တင်ဘာ (၁၄) ရက်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ထန်တလန်မြို့ ရှိ Johnson Memorial Baptist Church (JMBC) ဘုရားကျောင်း၏ အမိုးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ ပျက်စီးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့ ထန်တလန်မြို့နား တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ မြို့တွင်းသို့ လက်နက် ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစိုးရအဆောက်အအုံအပါအဝင် လူနေအိမ် (၁၉) ခန့် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရသည်။ (နောက်ဆက်တွဲ (၃) တွင် ကြည့်ပါ။) ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်းပေါင်း နှစ်ထောင် မှ သုံးထောင် ဝန်းကျင်ခန့် ရှိပါသည်။ လူဦးရေ တစ်သောင်းကျော် ခန့်ရှိသည့် ထန်တလန် မြို့တွင်းမှ ပြည်သူအားလုံးနီးပါးသည် မြို့ထဲ မနေဝံ့တော့ပဲ မြို့မှ စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသည်။ (နောက်ဆက်တွဲ (၁) တွင် ကြည့်ပါ။) ထို့အပြင် မီးငြိမ်းသတ်ရန် ရောက်လာသည့် ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ Pastor Cung Biak Hum အား စစ်ကောင်စီတပ်မှ ပစ်ခတ်ကာ လက်သူကြွယ်ဖြတ်ပြီး လက်ထပ်လက်စွပ်၊ ဖုန်းနှင့် နာရီတို့ကိုပါ ခိုးယူခဲ့သည်။ (နောက်ဆက်တွဲ (၂) တွင် ကြည့်ပါ။)
စက်တင်ဘာ (၂၉) ရက်နေ့တွင် စစ်ရှောင်ပြည်သူများ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ထန်တလန် မြို့တွင်းအခြေအနေ လေ့လာရန် သွားရောက်သည့် ထန်ထလန်မြို့ခံလူကြီး နှစ်ဦး ဦးရာလ်သူ (Pu Ral Tu) နှင့် ဦး ဟရမ်ကျုံး (Pu Hram Cung) တို့သည် စစ်ကောင်စီတပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်ဆံထိမှန်၍ သေဆုံးခဲ့ရသည်။ (နောက်ဆက်တွဲ (၂) တွင် ကြည့်ပါ။)
အောက်တိုဘာ (၂၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီခန့်တွင် လူသူကင်းမဲ့နေသည့် ထန်တလန်မြို့အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်မှ ဖောက်ထွင်းမှု ပြုလုပ်ကာ လက်နက်ကြီးများဖြင့် နေအိမ်များအား မီးရှိ့ပစ်ခတ်ခဲ့ သည်။ ထန်တလန်မြို့ရှိနေအိမ်များ မီးလောင်ခဲ့ရပြီး မီးငြိမ်းသတ်မည့်သူမရှိသောကြောင့် အောက်တိုဘာ (၃၀) ရက်နေ့အထိ ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရသည်။ CB Bank အပါအဝင် နေအိမ် (၁၆၄) လုံး၊ Church on the Rock (COTR) ဘုရားကျောင်းနှင့် Presbyterian ဘုရားကျောင်း တို့သည် မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရသည်။ စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့ စစ်ကောင်စီတပ်၏ ထန်တလန် မြို့တွင်း မီးရှို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မြို့သူ/မြို့သားများ ထွက်ပြေးကြရပြီးနောက် ထန်တလန်မြို့တွင်း တွင် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၂၆၉ မှ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး သောင်းလှိုင် ဦးစီးသည့် စစ်ကောင်စီတပ်သာ တပ်စွဲစခန်းချထားသည်။ (နောက်ဆက်တွဲ (၄) တွင် ကြည့်ပါ။)
နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များနှင့် လတ်တလောအခြေအနေ၊ လိုအပ်ချက်များ
ထန်တလန်မြို့နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများ၊ စစ်ကောင်စီတပ်၏ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များကြောင့် ပြည်သူများသည် ရွာလုံးကျွတ်နီးပါး ထွက်ပြေးကြရသည်။ ပြည်သူအချို့ မှာ ပြည်တွင်းရှိ အခြားဒေသများသို့ ထွက်ပြေးကြရပြီး တစ်ချို့မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ် ပြည်နယ်နှင့် အခြားပြည်နယ်များသို့ ရေကြောင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကုန်းကြောင်းခရီး၊ ခြေကျင်ခရီးဖြင့် လည်းကောင်း ထွက်ပြေးကြရသည်။ ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှု၊ တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ ခြင်းတို့ကြောင့် စစ်ရှောင်ပြည်သူများမှာ နေရပ်သို့ မပြန်နိုင်သေးဘဲ အခြေခံစားဝတ်နေရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး အိန္ဒိယနယ်မြေရောက် နေသည့် ဒုက္ခသည်များ၏ ဘဝမှာလည်း လုံခြုံမှုမရှိပေ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒမရှိခြင်းကြောင့် ဒုက္ခသည်များမှာ အချိန်မရွေး အဖမ်းခံ ရနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ပြန်လွှဲ နိုင်သည့်အတွက် စိုးရိမ်မှုများ မြင့်မားလျှက်ရှိသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာတွင် စစ်ပွဲအတွင်း လိုက်နာရမည့် စစ်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်နေပါသည်။ လူနေအိမ်များ၊ မြို့များအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးအထွဋ်အမြတ် ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတို့အား ပစ်ခတ်ခြင်း၊ တိုက်လေယာဉ်များ အသုံးပြု၍ ကျေးရွာလူနေအိမ် များအပေါ် ပစ်မှတ်ထားပစ်ချခြင်းတို့ဖြင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများအပေါ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြစ်မှု ကျူးလွန်နေပါသည်။
ထန်တလန်မြို့အား မီးလောင်တိုက်သွင်းသည့် စစ်ကောင်စီတပ်၏လုပ်ရပ်သည် အရပ်သားပြည်သူ များအပေါ် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေခြင်း၊ ထန်တလန်မြို့သူ/မြို့သားများအား အတင်းအကျပ် နေရပ်စွန့်ခွာစေခြင်းတို့သည် လူသားမျိုးနွယ်များအပေါ် ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုများဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားနေပေသည်။
နောက်ဆက်တွဲ (၁) (စစ်ရှောင်ပြည်သူစာရင်းများ)
၁။ ဇွန် လ (၁၀) ရက်နေ့ ခွာဟရိန်းတောင်ကြောတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲများကြောင့် ဖလမ်းမြို့နယ် သို့ စစ်ရှောင်လာသည့် ထန်တလန်ပြည်သူစာရင်း
စဉ် စစ်ရှောင်ရွာ ကျား မ စုစုပေါင်း
၁။ Tlangkhua 207 243 450 လေးလက်ရွာ ၁၂-၆-၂၁ ‌‌နေရပ်ပြန်ပြီး
၂။ Tihbual 63 51 114 လေးလက်ရွာ ။ ။
၃။ Tikhuangtum 10 15 25 လေးလက်ရွာ ။ ။
၄။ Thinghual 11 10 21 လေးလက်ရွာ ။ ။
၅။ Tlangte 18 15 33 ဖလမ်း Believer ဘုရားကျောင်းစခန်း ။ ။
စုစုပေါင်း 309 334 643
၂။ ဇွန်လအတွင်း ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းမှစစ်ရှောင်ပြည်သူစာရင်း
စဉ် ကျေးရွာအမည် ကျား မ စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
၁။ Khuafo 107 113 220 နေရပ်ပြန်ပြီး
၂။ Tlangte 120 99 219 ။
၃။ Sihcang 98 99 197 ။
၄။ Tihbual 47 47 94 ။
၅။ Arcirh 87 71 158 ။
၆။ Tikhuangtum 175 167 342 ။
၇။ Hmunthar 89 92 181 ။
၈။ Lungzarh 34 48 82 ။
၉။ TlangKhua 376 409 785 ။
၁၀။ Mual Kai 171 156 327 ။
၁၁။ Thinghual 118 135 253 ။
၁၂။ Tahtlang 238 229 467 ။
စုစုပေါင်း 1660 1665 3325
၃။ စက်တင်ဘာလ အတွင်း ကောက်ယူရရှိသည့် စစ်ရှောင်ပြည်သူစာရင်း
စခန်း/ရွာ ကျား မ မသန်စွမ်း ၅ နှစ်အောက်
၁။ Thlualam ၁၂၈ ၁၂၇ ၁ ၃၀ ၁ ၂၅၅
၂။ Vambai ၁၄၆ ၁၄၁ ၃ ၂၆ ၁ ၂၈၇
၃။ Hringkhan ၃၀၅ ၂၀၅ ၃ ၄၀ ၁ ၅၁၀
၄။ Thau A ၆၁ ၄၆ – ၁၆ – ၁၀၇
၅။ Thau B ၂၂၇ ၂၇၆ ၄ ၂၂ ၃ ၅၀၃
၆။ Bungtlang ၁၇၁ ၁၇၀ ၄ ၁၃ ၅ ၃၄၁
၇။ Hmunlipi ၁၄၆ ၁၂၆ ၃ ၃၃ ၁ ၂၇၂
၈။ Tlangrua A ၈၇ ၁၂၀ – – ၃ ၂၀၇
၉။ Tlangrua B ၂၉ ၄၄ ၂ ၁၁ – ၇၃
စုစုပေါင်း ၁၃၀၀ ၁၂၅၅ ၂၀ ၁၉၁ ၁၅ ၂၅၅၅
၁။ Vomkua ၆၀ ၇၄ ၄ ၂၃ – ၁၃၄
၂။ Lulpilung ၇ ၁၈ ၄ ၃ – ၂၅
၃။ Hmunhalh ၄၆ ၄၆ ၁ ၁၀ – ၉၂
၄။ Tikir A ၁၅ ၁၂ – ၄ – ၂၇
၅။ Tikir B ၅၉ ၇၀ ၉ ၈ ၄ ၁၂၉
၆။ Salen ၁၁၀ ၁၀၈ ၄ ၂၂ ၃ ၂၁၈
၇။ Sialam ၇၂ ၅၆ – – ၁ ၁၂၈
၈။ Banawhtlang ၁၁ ၁၅ ၂ ၃ – ၂၆
စုစုပေါင်း ၃၈၀ ၃၉၉ ၂၄ ၇၃ ၈ ၇၇၉
၁။ Lungzarh ၅၃ ၅၇ – ၁၀ ၂ ၁၃၄
၂။ Thinghual ၁၉ ၂၈ – ၅ ၁ ၂၅
၃။ Tikhuangtum ၅ ၇ – – – ၉၂
၄။ Tahtlang ၄၄ ၄၈ – ၇ – ၂၇
၅။ Sihcang ၇၈ ၈၉ ၁ ၂၅ ၃ ၁၂၉
၆။ Hmunthar ၇၁ ၅၆ ၁ ၂၃ ၁ ၂၁၈
၇။ Mualkai ၁၁၈ ၁၂၆ ၁၁ ၂၀ ၂ ၁၂၈
၈။ Arcirh ၄၄ ၇၁ ၇ ၁၈ ၃ ၂၆
စုစုပေါင်း ၄၃၂ ၄၈၂ ၂၀ ၁၀၈ ၁၂ ၉၁၄
၁။ Vanzang ၅၀ ၅၇ – – – ၁၀၇
၂။ Sopum ၅၄ ၇၅ ၁ ၁၂ – ၁၂၉
၃။ Lungding ၁၉၂ ၁၆ – – – ၂၀၈
၄။ Tlanglo ၁၂ ၂၄ – ၈ – ၃၆
၅။ Tlangpi ၅၀ ၅၁ ၁ ၁၂ – ၁၀၁
၆။ Farawn ၆၉ ၉၆ – ၂၀ – ၁၆၅
စုစုပေါင်း ၄၂၇ ၃၁၉ ၂ ၅၂ ၀ ၇၄၆
၁။ Sihhmuh ၆၉ ၇၁ – ၂၃ ၁ ၁၄၀
၂။ Thangzang A ၁၀၉ ၉၁ ၂ ၃၃ ၄ ၂၀၀
၃။ Thangzang B ၄ ၄ – – – ၈
၄။ Ruakhua ၁၃၄ ၁၄၄ ၁၆ ၅၁ ၂ ၂၇၈
၅။ Fungkah ၉၂ ၁၀၂ ၄ ၁၉ ၁ ၁၉၄
၆။ Saikah ၈၆ ၉၁ ၃ ၈ ၁ ၁၇၇
၇။ Ruabuk ၁၁၄ ၁၁၂ ၇ ၃၂ ၂ ၂၂၆
၈။ Bungkhua ၂၈၇ ၂၄၃ – ၆၂ ၅ ၅၃၀
၉။ Lungler ၁၉၁ ၂၀၆ ၈ ၁၅ ၅ ၃၉၇
၁၀။ Ralpel ၄၈ ၇၂ ၁၀ ၃၀ ၇ ၁၂၀
၁၁။ Dawn ၁၃၃ ၁၇၇ – ၁၇ – ၃၁၀
၁၂။ Zaangtlang ၇၆ ၇၅ ၂ ၂၂ ၁ ၁၅၁
စုစုပေါင်း ၁၃၄၃ ၁၃၈၈ ၃၂ ၂၇၃ ၂၁ ၂၇၃၁
မှတ်ချက်။ ။ စက်တင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့ Thantlang Placement Affairs Committee-IDPs help မှ ကောက်ယူရရှိသော စာရင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ရှောင် ပြည်သူပေါင်း (၇၇၂၅) ဦးထိ ရှိပါသည်။ ၎င်းအပြင် မြို့ပြဒေသ (သို့) ဆွေမျိုးများရှိရာ ဒေသသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သည့် စစ်ရှောင်ပြည်သူအများအပြား ရှိနေပါသေးသည်။
နောက်ဆက်တွဲ (၂) (သေဆုံး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစာရင်းများ)
စဉ် အမည် အခြေအနေ ရက်စွဲ
၁။ Van Bawi Thang (10 years) သေဆုံး ၂၅-၈-၂၁
၂။ Pa Sangte (18 years) ဒဏ်ရာရ ၂၅-၈-၂၁
၃။ Pu Tin Cung (31 years) ဒဏ်ရာရ ၂၅-၈-၂၁
၄။ Pi Cia Sung (31 years) ဒဏ်ရာရ ၂၅-၈-၂၁
၅။ Pa Thawng Tha Thang (45 years) ဒဏ်ရာရ ၂၅-၈-၂၁
၆။ Pa Za Lian Thang (13 years) ဒဏ်ရာရ ၂၅-၈-၂၁
၇။ Nu Ngun Kip Thluai (15 years) ဒဏ်ရာရ ၂၅-၈-၂၁
၈။ Pa Aung Than (44 years) ဒဏ်ရာရ ၂၅-၈-၂၁
၉။ Lal San Mawi (12 years) ဒဏ်ရာရ ၂၅-၈-၂၁
၁၀။ Lal Pek Thang (10 years) ဒဏ်ရာရ ၂၅-၈-၂၁
၁၁။ Pu Hlei Bik (45 years) သေဆုံး ၂၇-၈-၂၁
၁၂။ Uk Lian Kham (14 years) သေဆုံး ၂၇-၈-၂၁
၁၃။ Tluang Bawi ဒဏ်ရာရ (ခါး၊ လက်မောင်း) ၂၇-၈-၂၁
၁၄။ Bawi Hum ဒဏ်ရာရ (ခြေထောက်) ၂၇-၈-၂၁
၁၅။ Duh Heli Pa ဒဏ်ရာရ ၂၇-၈-၂၁
၁၆။ Pa Phir Cung ဒဏ်ရာရ ၂၇-၈-၂၁
၁၇။ Pa Biak Tling Cung ဒဏ်ရာရ ၂၇-၈-၂၁
၁၈။ Pa Tha Peng Lian ဒဏ်ရာရ ၂၇-၈-၂၁
၁၉။ Pu Tial Thawng ဒဏ်ရာရ ၂၇-၈-၂၁
၂၀။ Pa Bawi Nawl ဒဏ်ရာရ ၂၇-၈-၂၁
၂၁။ Pu Mang Lian Chawn ဒဏ်ရာရ ၂၇-၈-၂၁
၂၂။ Pu Fung Lian Mang ဒဏ်ရာရ ၂၇-၈-၂၁
၂၃။ Pu Than Ceu ဒဏ်ရာရ ၂၇-၈-၂၁
၂၄။ James Van Bawi Lian (9-month-old) ဒဏ်ရာရ ၉-၉-၂၁
၂၅။ Jenifer (15 years) ဒဏ်ရာရ ၉-၉-၂၁
၂၆။ Van Hawn Cuai (23 years) ဒဏ်ရာရ ၉-၉-၂၁
၂၇။ Sui Ci (55 years) ဒဏ်ရာရ ၉-၉-၂၁
၂၈။ Pastor Cung Biak Hum သေဆုံး ၁၈-၉-၂၁
၂၉။ Pu Ral Tu သေဆုံး ၂၉-၉-၂၁
၃၀။ Pu Hram Cung သေဆုံး ၂၉-၉-၂၁
နောက်ဆက်တွဲ (၃) မီးလောင်ပြာကျခဲ့သည့် နေအိမ်ပိုင်ရှင်များ
No Name Family member Date
1 Pu Chan Vung 8 09-09-2021
2 Pu Rual Tling – 18-09-2021
3 Pu Zang Ling418-09-2021
4 Pi Sui Nawn – 18-09-2021
5 Pu Daniel618-09-2021
6 Pu Ceu Cin718-09-2021
7 Pi Ngun Pum418-09-2021
8 Pu Lal Hngak 8 18-09-2021
9 Pi Tuan Thlem218-09-2021
10 Sui Doi418-09-2021
11 Pu Thang Lian418-09-2021
12 Pi Za Neih Thlual318-09-2021
13 Pu Hram Lin – 18-09-2021
14 Pu Hram Uk 8 18-09-2021
15 Pu Hniar Kulh418-09-2021
16 Pu Thang Tin Lian 8 18-09-2021
17 Pu Thawng Mang618-09-2021
18 Pi Tial Sui218-09-2021
19 Pu Ngun Hei 13 18-09-2021
20 Van Za Ling518-09-2021
နောက်ဆက်တွဲ (၄) အောက်တိုဘာ (၂၉) ရက်နေ့ မီးလောင်ပြာကျခဲ့သည့် နေအိမ်များ
No House Owner Number of Houses Ward
1 Pu Ngun Hnah 1 Zunghmun
2 Pu Lian Hlei 1
3 Pu Sui Tang 1
4 Pu Hram Hmung 1
5 Pu Thla Uk 1
6 Rev. Sang Hleih 1
7 Mang Ling 1
8 Pu Thla Kam 1
9 Pu Hniar Cin 1
10 Pu Hram Lian Thang 1
11 Pu Wanna 1
12 Dawt Lian Nu 1
13 Pu Buan Hrang 1
14 Pu Tial Bik 1
15 Pu Sai Hmung 1
16 Nau Chin 1
17 Aung Bo 1
18 Pu Khen Lal 2
19 Pu Sang Lawm 1
20 Sang Ku Nu te inn 1
21 Pu Veng Kam 1
22 Pu Ram Uk Ceu 1
23 Pi Ngun Zing 1
24 Pu Cung Bik 1
25 Pi Tha Thluai 1
26 Nunu te inn (Sang Hei) 1
27 Pu Hre Lian 1
28 Kyaw Kyaw 1
29 Sayamah Mah Tin 1
30 Pu Ceu Cin 1
31 Rev. Than Hnin 1
32 Paan Cherry Hotel 1
33 Rev. Biak Kam 1
34 Far Hoi Nu 1
35 Pu Thla kung 1
36 Thla Bik Nu 1
37 Pu Joshua +1 2
38 Presbyterian Church 1
39 Paster Malvin 2
40 Pu Mang Uk 1
41 Pu Tuan Sang 1
42 Pu Mang Hleih 1
43 Pu Kap Hlei Thang 1
44 Pu Thla Nak 1
45 Pu Kio Kung 1
46 Pu Val Hleih Thang 1
47 Pi Za Tlem+1 2
48 Pu Ni Khar 1
49 Pastor Cung Lian Mang 1
50 Pi Ngun Tlem 1
51 Pi Aye Than 1
52 Pu Sui Kam 1
53 Pu Lian Hram 1
54 Education Office Quarter 1 Zunghmun
55 Pu Siang Awr +12Market
56 Pu Tha Peng 1
57 Pu Hre Kam 1
58 Pu Thang Thai 1
59 Pu Ceu Kam 1
60 Sui Chin Nu 1
61 Pu Hrang Tum 1
62 Rev. Ram Hre 1
63 Moe Moe Aye Nu 1
64 Pu Biak Nawl 1
65 Pu Chan Ham 1
66 Pu Thawng Lian 1
67 Pi Sun Zing 1
68 Pu Ram To 1
69 Nu Mi 1
70 Pu Lian Hmung 1
71 Pu Than Ceu 1
72 Pu Vai Maung 1
73 Pu Thla Kung 1
74 Pu Nam Hmung 1
75 Pastor Ria Ce 1
76 COTR Church 1
77 Sui Bawi 1
78 Fung Cung Nu 1
79 Pu Tha Cung 1
80 Pu Sang Hmung 1
81 Pu Mang Bik 1
82 Evan. Tial Uk 1
83 Saya Lian Cung 1
84 Pu Ngun Or 1
85 Pu Al Cung+1 2
86 Rev. Tawk Lian Bawi 1
87 Pu Ni Chawn 1
88 Pu Aung Kung 1
89 Pu Thawng Hmung 1
90 Pu Chan Tum 1
91 Pu Ling Uk 1
92 Pu Lal Luai 1
93 Pu Thawng Hmun 1
94 Nu Mi Dawr 1
95 Pu Tha Cung 1
96 Henry Siang Bik Cung 1
97 Pu Run Remh Thang 1
98 Pu Van Bawi Lian 1
99 Pu Chan Helih (Van Lian Pa) 1
100 Pu Huat Hnin 1
101 Pi Ni Iang 1
102 Saya Ing Cem 1
103 Pu Sang Khum+12Market
104 Van Za Ling Thang+12Biakinn
105 Dawn Pa inn 1
106 Ngun Lian Ceu 1
107 Pu Hrang Herh 1
108 Van Biak Kung 1
109 Pu Zaam Thang 1
110 Pu Tin Thang 1
111 Pi Iang Thluai 1
112 Pu Chum Kio 1
113 Pu Tum Sang 1
114 Pu Thang Hrim 1
115 Pi Heli Tlem 1
116 Pi Tuan Chin 1
117 Pu Thla Lian 1
118 Bawi Thang Nu 1
119 Pu Tha Bawi 1
120 Pu Za Chum 1
121 Pu Thawng Kung 1
122 Pu Van Neih Thang 1
123 Pu No Lal Ling 1
124 Pu Chan Kam 1
125 Pu Dawt Cung 1
126 Pu No Hei 1
127 Pu Thla Liang 1
128 CB Bank 1
129 Duh Cung Nu Inn 1
130 Pu Sui Khar 1 Biakinn
131 Pu Tei Cham 1 TABC
132 Pu Maradon 1
133 Pu Hrang Hu 1
134 Pu Ngia Thang 1
135 Pi Bau te+1 2
136 Pu Van Lal Hngak+1 2
137 Pi Hoi Nawn 1
138 Pu Hrang Tluang 1
139 Pu Tlir Bil 1
140 Pu Sang Chin 1
141 Pu Cung Lian Bawi 1
142 Pu Hre Ling 1
143 Pu Cung Lian Hum 1
144 Pu Thla Lian 1
145 Pu Khar Lian 1
146 Pu Lai Peng 1
147 Pu Thang Hmun 1
148 Pu Chan Hre 1
149 Sung Heli Nu 1
150 TBC Biakinn quarter 1 TABC
151 Pu Buan Cung 1 Lungtial
152 Pu Ceu Cung 1 Lungtial
153 Pi Sung Bau 1 Lungtial
154 Lai Villa 1 Lungtial
မှတ်ချက်။ ။Thantlang Placement Affairs Committee-IDP help မှ ထုတ်ပြန်သည့် အောက်တိုဘာ (၂၉) ရက်နေ့ မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရသည့် ထန်တလန်မြို့ နေအိမ် စာရင်း ဖြစ်ပါသည်။